Apple Arcade, ndiro zita reApple's yemitambo chikuva | IPhone nhau
Iyo App Store yave kuita sosi huru yemari yeApple. Parizvino chikuva cheApple chine vanoshandisa vanopfuura bhiriyoni imwe, vashandisi vanonakidzwa nemitambo inodarika mazana matatu ezviuru inowanikwa muchitoro chekushandisa. Iyo App Store inotipa mitambo yemahara nekutenga kwakabatanidzwa, nezvishambadziro kana kuburikidza nekubhadharwa kumwe chete.
Zvese izvo zviri kuda kuchinja nekuda kweiyo nyowani Apple Arcade sevhisi, mutambo kunyorera chikuva, zvese zvitsva zvachose kwatichakwanisa kunakidzwa neizvo Apple zvinodaidza kutsanangudzwa kwemitambo. Heano mamwe mashoko nezve Apple nyowani yemutambo wekunyorera chikuva chinonzi Apple Arcade.
Apple yasvika pachibvumirano nevatambi vemitambo vakanyanya kukosha veApp Store kuti vape system yemutambo, yatinogona nayo nakidzwa kuburikidza nemubhadharo wemwedzi wega wega.
Iyi chikuva ichave nemitambo inodarika zana zvakakwana zvachose uye izvo isu hatingazowane pane chero imwe chikuva. Iko kushanda kuri nyore kwazvo, sezvo isu tichifanira chete kuenda kuArcade tab yeApp Store, sarudza mutambo watinoda kutamba uye tinya pa Play.
Mubvunzo unomuka ndewekuti mitambo iyi ichave iripo kutenga here kuburikidza neApp Store kana ichangowanikwa kuburikidza neshumiro iyi. Zvichazova inowanikwa pakupera kwe2019 uye pamwe chete inosvika nyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu.
Zvese zvekugadzirisa zvemitambo zvinosanganisirwa mubhadharo wemwedzi uye zvinoenderana neKugovana Kwemhuri. Apple Store inoenderana neiyo iPhone, iPad, iPod touch, uye Apple TV.
Kubva pamutengo weApple Arcade, Apple inoti izvozvo zvichazotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple Arcade, ndiro zita repuratifomu yemitambo yaApple
Apple Kadhi, nhanho inowedzera mukubhadhara kweApple